काठमाडौं । भ्वाईस अफ नेपालका कन्टेस्टेन्ट दिपेश लामाले नेपाली सांगीतिक जगतमा डेब्यु गरेका छन् । लामा ‘जुनकिरी’ बोलको गीतमार्फत नेपाली श्रोतामाझ आएका हुन् । दिपेशले आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत म्य...
अफवाह फैलाउँने समाचार बारे रवीले मुख खोले
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन‘अनन्त’को हवाला दिँदै विभिन्न अनलाईन र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचारप्रति सञ्चारकर्मी रवी लामिछानेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । पत्रकार रबि लामिछाने &l...
युट्युबर प्रनेश गौतम रिहा
काठमाडौं । फिल्म समीक्षा गर्दा पक्राउ परेका युट्युबर प्रनेश गौतम रिहा भएका छन् । गौतमलाई प्रहरीले हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको हो । फिल्म वीरविक्रम २ का निर्देशक मिलन चाम्सको उजुरीपछि पक्राउ परेका दौतमको पक्षमा धेरैले आवाज उठाउँदै ...
बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘साहो’को दमदार टीजर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । बलिउड र टलिउडले मिलेर एक धमाकेदार फिल्म ‘साहो’ बनाएको छ । दर्शकलाई घोषणादेखि नै यस फिल्मको ट्रेलर र टीजरको व्यग्र प्रतिक्षा थियो । बिहीवार फिल्मको अफिसियल टीजर सार्वजनिक भएको छ । टीजरबाट फिल्म एक्सन र...
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनले पहिलो पटक नेपाली गीतमा नाँचेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘पासवर्ड’ नामको फिल्ममा उनले गरेको आइटम नृत्य बिहिबार सार्वजनिक भएको छ । जहाँ सन्नी दर्जनौँ कोरस सहित बोल्ड अबत...
एजेन्सी। समशेरा फिल्मको पहिलो शेड्युल पूरा गरेपछि अभिनेत्री वाणी कपूर अहिले गोवामा साथीहरुसँग ब्याचलरेट ट्रिपमा छिन् । वाणीका हट फोटोहरु सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेका छन् । वाणिीले दुई फिल्म रितिक भर्सेज टाइगर र त्यसपछि समशेराको...
साहोमा प्रभासमात्र होइन श्रद्धा कपूरको पनि हुनेछ दमदार एक्सन
मुम्बई । बाहुबली फेम प्रभास र श्रद्धा कपुरको नयाँ फिल्म साहोको पछिल्लो पोस्टर अहिले चर्चामा रहेको छ । केहिसमय अघि प्रभासको पोष्टर सार्वजनिक भएकोमा अहिले श्रद्धाले एक्लै पेस्तोल समातेको पोस्टर सार्वजनिक भएपछि फिल्ममा प्रभास र श्रद्धाको रोम...
काठमाडौं । चलचित्र वीर विक्रम–२ समिक्षा गरेकै कारण युट्युवर प्रनेश गौतमलाई प्रहरी हिरासतमा राखेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै चलचित्र निर्देशक मिलन चाम्सले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार ...
भ्रष्ट्राचार विरुद्ध रमेश राज भट्टराइले गरे गीत मार्फत खबरदारी (भिडियो)
काठमाडौं । गायक रमेश राज भट्टराईको शब्द,संगित र स्वरमा भ्रष्ट्राचार बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । देशको वर्तमान अवस्थालाई समेटर प्रस्तुत गरिएको गीत छोटो समयमै चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । गीतमा बिशेषगरी नेता,भ्रष्ट्राचार,अन्याय,सरकार ...
मुम्बई। बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनकी नातिनी नब्या नबेलीले फिल्म क्षेत्रमा आउन यसअघि देखि नै अस्वीकार गर्दै आएकी छिन्। तर, सामाजिक सञ्जालमा उनका तस्बिरहरु सधैँ चर्चामा हुने गर्दछन्। नब्या नबेलीको सम्बन्धलाई लिएर धेरै चर्चा र अड्कलबाज...
सुर्खेत । एक दर्जन बढी सुर्खेती युवाको प्रयासमा सामाजिक कुरीतिले समाज विकासमा पार्ने प्रभावलाई चलचित्र ‘अधुरो’ पर्दामा उतारिएको छ । पुस्ता मिडिया प्रालिको ब्यानरमा यसको गीत र ‘ट्रिजर’ सोमबार सुर्खेतका वर...
म्यागजिनको कभरका लागि सारा अली खानले गराइन् बोल्ड फोटोशूट, हेर्नुहोस् १० फोटो
काठमाडौं। सारा अली खान पछिल्लो समयमा बलिउडमा धेरै माग हुने हिरोइनमध्ये पर्छिन् । उनले समय समयमा म्यागजिनका लागि बोल्ड फोटोशूट गराउँछिन् । उनले फिल्मफेयर म्यागजिनबाट डेब्यू गरेकी थिइन् । अहिले फेरि एकपटक सारा चर्चामा छिन् ...
काठमाडौं । भारतको जी टिभीबाट प्रशारित भएको सारेगमप लिटल च्याम्प्स कार्यक्रममा तेस्रो भएका इटहरी उपमहानगरपालिका ५ का ११ वर्षीय बालक प्रीतम आचार्य सोमवार नेपाल फर्किएका छन्। उनी झापाको काँकरभिट्टा आइपुग्दा उनका आफन्त, सङ्गीतप्रेमी तथा उ...
छोरीको यस्तो भिडियो आएपछि शाहरुखमाथि संस्कार सिकाउन नसकेको आरोप (भिडियो)
मुम्बइ। बलिउडका बादशाह भनिने शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खान बी टाउनको चर्चित स्टार किड् मध्येका एक हुन् । उनको फोटो र भिडियो आउने बित्तिकै चर्चाको विषय बन्ने गर्छ । केही दिन अघि एक विवाहको क्रममा सुहानालाई पारम्परिक पहिरनमा देखिएको...
मुम्बई । भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् । विश्वकप खेल्ने आशमा रहेका युवराजले विश्वकप खेल्ने भारतीय टिममा नपरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका हुन् । तीन बर्षिय पहिला ब्रिटिश-...
सारेगामापमा नेपालका प्रितम र आयुषको भाग्यको फैसला भयो, कुन स्थान हासिल गरे ?
काठमाडौं । चर्चित भारतीय रियालिटी शो ‘सारेगमप लिटिल च्याम्प’मा नेपालका दुई बालगायक तेस्रो र चौथो भएका छन्। आइतबार साँझ भएको जी टीभीको फाइनल कार्यक्रममा प्रतिष्पर्धा गरेका प्रितम आचार्य तेस्रो भए भने आयुष केसी चौथो भए। ...
काठमाडौं । महानायक राजेश हमालको जन्मदिन आज परेको छ । १९६४ जुन ९ का दिन पाल्पाको तानसेनमा जन्मिएका महानायक हमाल ले चलचित्र ‘युगदेखि युग सम्म’ चलचित्र बाट नायकको रुपमा डेव्यू गरेका थिए । ३ सय बढि चलचित्रमा काम गर...
आज आयुष र प्रीतमको भाग्य फैसला हुँदै, को बन्ला विजेता ?
काठमाडौँ । भारतीय टेलिभिजन जी टीभीको सङ्गीतको रियालिटी शो सारेगमप लिटल च्याम्प्स २०१९ प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेका दुई नेपाली बालक आयुष र प्रीतम सानैदेखि सङ्गीतमा तीक्ष्ण भएकाले यो स्थानसम्म आइपुग्न सफल भएका उनीहरूका अभिभावकहरूले...
विश्वकपको नाममा पुनमले पोस्ट गरिन् नग्न फोटो ! इन्स्टाग्राममा हंगामा
एजेन्सी। सन् २०११ मा भारतीय क्रिकेट टिमले विश्वकप जिते नग्न हुने बचन दिएर सनसनी मच्चाउने पुनम पाण्डेले एकपटक पुनः विश्वकपको नाममा अत्यधिक बोल्ड फोटो सेयर गरेकी छिन् । पुनमले बेलायतमा चलिरहेको विश्वकप सन् २०१९ को समर्थनमा एउटा फो...
काठमाडौं। टेलिभिज सिरियल पारिवारिक शोको रुपमा निकै लोकप्रिय छन् । नेपालमा भारतीय टेलिभिजनको ठूलो प्रभाव छ र भारतीय सिरियलका फ्यान नेपालमा ठूलो संख्यामा छन् । बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खानले समेत आफ्नो करिअरको सुरुवात सानो पर्दाबा...
विदेशी विज्ञापन बज्ने सबै भारतीय च्यानल बन्द